UMongameli waseLithuania uthetha "nge-zas'tsyarogai" phambi kwentlanganiso kaPutin noTump emva kwesigxina kunye noKim Jong-no-HienaLouca
UMongameli waseLithuania ubhekisela kwi "zasyatsarogai" phambi kwentlanganiso kaPutin noTump emva kwesigxina kunye noKim Jong-Eun
UMongameli waseLithuania uDalia Grybauskaite ubeke ingxoxo malunga nomhlangano ozayo phakathi kwabaongameli beRashiya kunye neUnited States.
"Sithatha le ntlanganiso kunye neZasyarogai. Ewe, siyaqaphela. Sibone intlanganiso kunye neNyakatho Korea kunye neziphumo zayo, zithi, akucaci, "watsho.
Intlanganiso uDonald Trump noKim Jong-un 12 Juni 2018
Ngexesha elifanayo, wathi, i-US ayiyi kuphelisa izigwebo ezenziwa eRussia, kuba "iMelika iyinyaniso kwiindawo zayo ezichasene nabarhaqa emhlabeni jikelele."
Iintloko ze-United States ne-Russia ziya kudibana kwi-16 Julayi eFinland. Ngokomongameli waseMelika uDonald Trump, kwi-ajenda iya kuba yi-Ukraine, iRaw kunye nokuphazamiseka kwiinketho zase-US, apho iNdlu ye-White igxeke iKremlin.
UDonald Trump noVladimir Putin badibana kabini kwiintlanganiso zamazwe ngamazwe baza bathetha ngefowuni ubuncinane amaxesha asibhozo. Intlanganiso eyahlukileyo phakathi koongameli baseRashiya kunye ne-United States, nangona kunjalo, ayinalo ixesha lokuxhaswa kweCrimea kwi-2014.
27 NgoJuni, uMcebisi weSizwe soKhuseleko weSizwe uJohn Bolton wahlangana eMoscow kunye noMongameli waseRashiya uVladimir Putin. Ekuqaleni kwentlanganiso, uPutin wathi uMoscow "akazange afune ukuhlangabezana neWashington," kwaye wacetyiswa ukuba "xubushe amanyathelo okubuyisela ubudlelwane phakathi kwamazwe amabini." Ngokutsho kukaPutin, okhokelwa yiendaba zaseRussia, ukuvakashelwa kweBolton eMoscow "kunika ithemba" ukuba amaqela aya kukwazi ukuthatha amanyathelo okuqala "ukubuyisela ubudlelwane obupheleleyo."
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-311, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
Sekunje namhlanje: umhla wokuzalwa kaPaul McCartney
U-Markin wase-Belarusian unarchist wakhululwa ejele laseRashiya, eyala ukuba ahambe
ICuba yayiza kuqonda ilungelo labemi kwimpahla yabucala
I-ECHR inikezele umvuzo kwimindeni ka-Anna Politkovskaya
I-Trump yenza ukuvunyelwa kwi-EU kwimirhumo yezorhwebo - iWall Street Journal
I-Trump ilungele ukubeka "izigwebo ezinkulu" malunga neTurkey ngokubanjwa komfundisi
Post Previous:I-Trump inikezela i-NATO amazwe ibhenkethi entsha yokuchithwa kwemali - 4% ye-GDP
Okulandelayo Post:Isibhengezo se-NATO: "Siyakugweba ukuhlonyelwa kweCrimea, esiyize siyayiqonda"
Ihlobo lifikile - amantombazana ahamba ngeenxa zonke emhlabeni ... (49)